Guurka | Diinta | somaanta
Suáal 302-aad: Guurka xukunkiisa waa sidee?
Jawaab 302-aad: Wuxuu waajib ku yahay dhallinyarada muslimiinta ee awoodda guurka. (Daliil: Sharraxaadda shariifka, xaddiiska 824-aad qeybta guurka).
Suáal 303-aad: Waa sidee qofku inuu yiraahdo waligeey guursan maayo?
Jawaab 303-aad: Guurka wuxuu ka mid yahay sunnada Nabiga (S:C.W.), qofkii ka leexda sunnadaasna waa qof lunsan. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 825-aad qaybta Guurka).
Suáal 304-aad: Ducada ay sunnada tahay in loogu duceeyo qofka guursanaya waa maxay?
Jawaab 304-aad: Baaraka-laahu laka wabaaraka calayka wajamaca bayna kumaa fii khayr. (Daliil: Xaddiiska 828-aad qaybta Guurka).
Suáal 305-aad: Ninka marka uu rabo inuu gabadh guursado, ma fiirin karaa?
Jawaab 305-aad: Haa, way bannaan tahay. (Daliil: Daliil: Xaddiiska 831-aad cutubka qaybta Guurka).
Suáal 306-aad: Ma guursan kartaa haweeney wali laáan?
Jawaab 306-aad: Maya, nikaaxaasna ma jiro. (Daliil: Xaddiiska 835-aad qaybta Guurka).
Suáal 307-aad: Waa sidee inuu ninku doono gabadh uu nin kale doonay?
Jawaab 307-aad: Ma bannaana haddii la siiyay gabadha ama la soo dhaweeyey ninkaas.
Suáal 308-aad: Waa sidee in la iswaydaarsado laba gabdhood meher laáan?
Jawaba 308-aad: Waa xaaraan waana baadil. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 840-aad qaybta Guurka)
Suáal 309-aad: Gabadha waalidkeed ma ku khasbi karaan guur nin aysan rabin? Haddii ay sidaa dhacdo maxaa u furan?
Jawaab 309-aad: Laguma khasbi karo, waxaana u furan inay diido ama yeesho, haddii ay diidana nikaaxaas ma soconayo. (Daliil: Xaddiiska 841-aad qaybta Guurka).
Suáal 310-aad: Gabar aan laheyn wali nikaaxiya, yaa nikaaxin kara?
Jawaab 310-aad: Suldaanka ama xaakimka magaaladaas. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 836-aad qaybta Guurka).
Suáal 311-aad: Galmada dhex martay nin iyo haweenay wali laáan isguursaday, ma lagu tilmaami karaa ZINO?
Jawaab 311-aad: Maya, laakiin nikaaxoodu waa baadil. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 836-aad qaybta Guurka).
Suáal 312-aad: Gabar mala iska meherin karaa iyadoo waxba idan la weydiin?
Jawaab 312-aad: Maya, oggolaashaheeda ayuu nikaaxaas sax ku noqon karaa. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 837-aad qaybta Guurka).
Suáal 313-aad: Maxaa la gudboon gabar iyo wiil israba, laakiin la isu diiday?
Jawaab 313-aad: Inay Maxkamad Islaami ah isla tagaan oo ay isku meheriso xataa hadduusan waalidku oggoleyn. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 836-aad qaybta Guurka).
Suáal 314-aad: Maxay xaq u leedahay Maxkamad Islaami ah oo ay u soo dacwootay gabar loo diiday wiil ay is rabaan inay is guursadaan?
Jawaab 314-aad: In abbaha lagu yiraahdo isku meheri, hadduu diidana Maxkamaddu isku meheriso. (Daliil: Sharraxaadda shariifka, xaddiiska 836-aad qaybta Guurka).
Suáal 315-aad: Maxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo marka la is guursanayo?
Jawaab 315-aad: Isla cidloobid/Khalwo, muddo dheer wada socosho, gacmo isqabsi, faraanti isku galin waana dhaqamo xun-xun oo sharciga ka soo horjeeda. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 836-aad qaybta Guurka).
Suáal 316-aad: Muxuu ninku ka sameyn shardiga ay gabadhu qabsatay markii la nikaaxinayay?
Jawaab 316-aad: Waa in loo oofiyaa shardigaas haddii uusan Sharciga ka hor imaanayn. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 847-aad qaybta Guurka).
Suáal 317-aad: Waa maxay nikaaxa mutcada? Waase side xukunkiisu?
Jawaab 317-aad: Waa nikaax muddo ku xiran, waana arrin xaaraam cad ah. (Daliil: Xaddiiska 848-aad qaybta Guurka).
Suáal 318-aad: Qof fiican oo xafidan nikaax ma u qabanayaa qof zaani ah?
Jawaab 318-aad: Maya. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 855-aad qaybta Guurka).
Suáal 319-aad: Dadku side isku guursan karaan xagga kufka (Isu qalmidda)?
Jawaab 319-aad: Xagga diinta iyo xagga dhawrsanaanta (akhlaaqda). (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 853-aad cutubka kufka iyo doorashada).
Suáal 320-aad: Haweenay hadday ka soo hor islaamto ninkeeda, ma sii qabi karaa?
Jawaab 320-aad: Maya, haweenay muslimad ah uma bannaana qof aan muslim aheyn. (Daliil: Sharraxaadda Shariifka, xaddiiska 861-aad cutubka kufka iyo doorashada).La soco qeybaha kale ee Kutubka oo ay isku dubbaridey Heyádda KAFAALO.